Madaxweyne Waare oo ku sugan dalka Jarmalka si uu maalgashi ugu helo Hirshabelle – Somali Top News
Madaxweyne Waare oo ku sugan dalka Jarmalka si uu maalgashi ugu helo Hirshabelle
March 16, 2019 March 16, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo howlo shaqo ku jooga Dalka Jarmalka ayaa halkaasi kulamo kula qaatay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Wadankaasi, iyo xubno ka tirsan maamul Goboleedka Berlin.
Madaxweynaha oo ugu horeyntii kulan la qaatay xubno ka tirsan Wasaaradda arrimaha Dibadda ayaa sharaxaad ka siiyay Fursadaha maalgashi ee ka jira Guud ahaan Dalka gaar ahaan Deegaanada Hirshabeelle iyo sida muhiimka ay ugu tahay In laga gacansiiyo dib u dhiska Iyo horumarinta deegaannada Hirshabelle.
Sidoo kale Madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu kulan la qaatay Mas’uuliyiin ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maaliyadda, aqalka Hoose ( Bundstag), aqalka sare ( Bundsrat), maamul goboleedka Berlin, Brandenburg, iyo Schleswig-Holstein, waxaana kulamadaasi ay kaga wada hadleen Arimaha Federalka, awood qeybsiga, khayraadka iyo dakhliga qeybsiga, iyo maqaamka caasimada Berlin, waxaana uu farta ku fiiqay madaxweynaha in fursada Waaweyn ay ka jiraan Hirshabeelle oo u baahan in looga faa’ideysto maalgashi dhul beereedka Deegaannada Hirshabelle, iyo in laga gacan siiyo horumarinta iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha Hirshabelle, waxbarashada, Caafimaadka.
Mas’uuliyiinta Dalka Jermalka ee la Kulmay, Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ku ammaanay Madaxweynaha Dadaalka uu ugu jiro horumarinta Hirshabelle iyagoona soo dhoweeyay dalabka ah in laga gacansiiyo dib u dhiska iyo horumarinta Hirshabelle diyaarna ay u yihiin in ay horumariyaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dib u dhiska magaalooyinka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayna soo booqan doonaan.
Jamhuuriyadda federaalka ee jarmalka waa wadan ka dhisan dhinaca federaalka, si aad ahna ugu horumaray ku dhaqanka iyo Hirgalinta arrimaha Federaalka, wuxuuna ka koobanyahay 16 Gobol. Wadankaan waxuu ku yaalaa Bartamaha qaarada Yurub waan wadan u baahan in laga faa’ideysto khibradiisa dhinaca Federaalka.
← Djibouti President Ismail Guelleh visits Somalia
Xiisada u dhaxeysa ganacsatada Berbera iyo Shirkadda DP World oo cirka isku shareertay →
Dowladda Soomaaliya oo joojisay qaadida Imtixaankii shahaadiga ee Ardayda Dugsiyada Sare
Maxaa ka soo baxay kulamadii dhexmaray sanatarada Puntland ku metela Aqalka Sare iyo M/weyne Dani
April 28, 2019 Somali Top News 0